DHL 50 သည်မြန်သောလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည် RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[19 / 11 / 2019] TransportationPark, Autism လူနာအလီ၏အိပ်မက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်	41 Kocaeli
[19 / 11 / 2019] İZBANရှိသန့်ရှင်းရေးလုပ်သားများအားတင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အလုပ်ထုတ်ခဲ့သည်	35 Izmir
[19 / 11 / 2019] ရုရှားကုမ္ပဏီ Gazprom သည် LPG ကိုတရုတ်ပြည်သို့မီးရထားဖြင့်ပို့သည်	7 ရုရှားနိုင်ငံ
[19 / 11 / 2019] ဆရာများအတွက်ရထားလက်မှတ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် '24 November' လျှော့စျေး	06 တူရကီ
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်ယခုနှစ် 50 DHL Express ကိုလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏တည်ထောင်သူ
26 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, 49 ဂျာမဏီ, ဥရောပ, လောက, အထွေထွေ, လေဆိပ်, လမ်းမကြီး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
လျင်မြန်သောလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏အသက်, DHL ၏တည်ထောင်သူမှာ
အဆိုပါ 1969 အတွက် DHL အဆွေခင်ပွန်းသုံးယောက် 50 နေဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သောအိတ်ကိုလွှဲပြောင်းရန်စိတ်ကူးနှင့်အတူထွက် set လေကြောင်းကုန်တင်သင်္ဘောများအတွက်ရေကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများမှတဆင့်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။ ဝက်ရာစုနှစ်တစ်ခုဆန်းသစ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ 220 ယနေ့နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဆက်လက်အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏ကိုယ်စားလှယ်များ၏ခေါင်းဆောင်မှုယူဆ။
မကြာမီတွင်နီးလ်အမ်းစထရောင်းရဲ့လလက်အိတ်တစ်တော်လှန်ရေးသမားစိတ်ကူးတီထွင်ထားပါတယ်အဖြစ်အာကာသကောင်းကင်၌ကုန်တင်သင်္ဘောကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရေကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများမှတဆင့်, Adrian Dalsey, Larry က Hillblom နဲ့ Robert လင်းလေယာဉ်ဆင်းသက်ပြီးနောက်။ ဤသည်ကုန်တင်ကုန်ချ၏အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးနှင့် ပတ်သက်. တာဖြစ်ပါတယ်, သင်္ဘောဦးတည်ရာမရောက်မီစတင်ဖို့နဲ့အားဖြင့်ဆိပ်ကမ်းမှာစောင့်ဆိုင်းအချိန်တိုသိသိသာသာကိုဆိုလိုနိုင်ပါ။ သူကတစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၏စိတ်ကူးတစ်ချိန်တည်းမှာက DHL ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမြန်လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု၏က start နှင့်ထူးခြားသောခရီးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
50 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းဦးဆောင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ Deutsche Post ကို DHL Group ၏ကမ္ဘာမှာဖြစ်လာသည့်ယနေ့အတွက်လမ်း, သင်ဆန်းသစ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူလူပုဂ္ဂလိကနှင့်နေ့စဉ်အသက်တာ၌အလုပ်လုပ်ကိုင်ပညာရှင်များလွယ်ကူချောမွေ့ရန်လိုသည်။ ယောဟနျသ Pearson, DHL Express, ကုမ္ပဏီရဲ့လျင်မြန်စွာနှင့် 50 လေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း၏ CEO ။ ယခုနှစ်အကဲဖြတ်ခုနှစ်တွင်ဟုသူကဆိုသည်:
"ကျနော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဟာယခုအချိန်အထိတီထွင်ကြတဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်အများအပြားန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်မြဲသက်ရောက်မှု left သိမြင်ဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာ၌အကြှနျုပျတို့၏န်ထမ်းကိုထောကျပံ့နိုင်ရန်အတွက်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ရေကြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အဘို့တတ်နိုင်သလောက်ပြုလုပ်အဖြစ်အကျိုးရှိစွာလုပ်, ငါတို့ဘဝမှနည်းပညာကိုစမ်းသပ်နှင့်ဆန်းသစ်ဖို့ရှိခြင်းပါပဲ။ အဆိုပါထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ထဲမှာတိုးပွားအဖြစ်မှန်နှင့်စက်ရုပ်ဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. အပြင်, အထူးသဖြင့်, ကျနော်တို့ဒေသများရောက်ရှိရန်ခဲယဉ်းမှပေးပို့စေအသစ်တစ်ခုကိုဖြန့်ဝေမှုနည်းလမ်းများမတွေ့ရှိကြဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ရေကန်ဗစ်တိုးရီးယားပေါ်မှာငါတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ DHL အထုပ် drone'u, ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပုံမှန်အပေါ်တစ်ဦးဝေးလံသောကျွန်းတစ်ကျွန်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံမှလျင်မြန်စွာမူးယစ်ဆေးဖြန့်ဝေစေရန်ခွင့်ပြုအရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများကိုအပ်ရသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ၏အနာဂတ်နှင့်ပြဿနာများ၏ဖြေရှင်းချက်ကိုဦးတည်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်ရဲရင့်သောမျက်နှာပြီးသားယူဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enabled ထားပြီးလိမ့်မယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် StreetScooter ထုတ်လုပ်ရန်။ "
Pearson: "ဒီနှစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 1 သန်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းစုစုပေါင်းလိမ့်မည်"
သုညထုတ်လွှတ်: ကိုလည်းပစ်မှတ် 2050 "ကျနော်တို့ယခုနှစ် 2025 များအတွက်ကိုယျ့ကိုယျကိုသတ်မှတ်ထားရည်မှန်းချက်ကြီးနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်သက်တမ်းပစ်မှတ်နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးသည်ဤအရေးကြီးသောမှတ်တိုင်ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်စုသည်" သုညထုတ်လွှတ်မှု 2050 အတွက်ပစ်မှတ်ထားရည်ညွှန်းပြီး, သူတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍယူ Pearson မှညွှန်ပြ Deutsche Post ကို DHL Group မှ, 50 ၏နယ်ပယ်အတွင်း၌ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေရှည်တည်တံ့ရေးမဟာဗျူဟာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖြန့်ချိဤမျှလောက်များစွာသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာရောက်ရှိနေပြီသေချာပါတယ်။ 50 ။ တစ်နှစ်ငါတို့သည်ငါတို့၏အခမ်းအနား၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်နိုင်ငံအများအပြားအတွက်များစွာသောလုပ်ဆောင်မှုများကျင်းပခဲ့တယ်။ တာဝန်ရှိသူတဦးကထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမိတ်ဖက် "တစ်ဦးကအလင်း Shine" ဟုအဆိုပါသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်အောက်မှာထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်အဖြစ်ဒါပေမယ့်ပွဲတစ်ပွဲကျွန်တော်တို့ကိုယခုနှစ်အရှိဆုံးဒီကဗျာအဖြစ်အပျက်, Bryan Adams, ငါတို့သည်သူ့ကိုလိုက်ပါသွား။ ဥပမာအတူတူကျနော်တို့ရာသီဥတုကာကွယ်မှုအပေါ်တစ်ဦးရပ်တည်ချက်ယူချင်; Bryan Adams ကအဆိုပါ Arbore နေ့ဖောင်ဒေးရှင်းမှစက်ရုံ-များအတွက်-The Planet ကို, Root weforest ရိုက်ယူခြင်းနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ကျနော်တို့ကိုရောင်းတစ်ဦးချင်းစီဖျော်ဖြေပွဲလက်မှတ်များအတွက်အပင်တစ်ပင်စိုက်ရန်ကတိပြုခဲ့ကြသည်။ ဒီနှစ်မှာတော့ကျနော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စုစုပေါင်းတစ်သန်းသစ်ပင်များစိုက်ပျိုးလိမ့်မည်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Lassen: "50 ။ တူရကီ၌အကြှနျုပျတို့၏အနှစ်အတွင်းအရေးအပါဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတစ်ခုမှာ "
အဆိုပါ DHL Express ကိုတူရကီ CEO ဖြစ်သူ Claus Lassen, သူတို့ကတူရကီအတွက် 1981 ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စတင် 38 သူတို့ငါတို့သည်ဤလောကမှတူရကီချိတ်ဆက်နေကြတယ်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး၏သင်တန်းနည်းပြအဖြစ်စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက "သမိုင်း၏နှစ်ပေါင်းများကဆိုသည်။ ကုမ္ပဏီပို့ကုန်နီးပါးတူရကီစီးပွားရေးလုပ်နေတာကြောင့်အဖြစ်လွယ်ကူအောင်ပြည့်စုံထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆက်ကပ်။ ဒါ့အပြင်တကမ္ဘာလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ 50 ။ ပွဲကျင်းပ, ကျနော်တို့တူရကီအတွက်အရေးအပါဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတဦးတည်းဖျော်ဖြေခံရဖို့အလိုရှိကြသောအခါတစ်ကြိမ်တစ်နှစ်။ အဆိုပါ 135 သန်းနှင့်ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်အစ္စတန်ဘူလ်နောက်နှစ်အတွက်လေဆိပ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောစစ်ဆင်ရေးစင်တာစုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပါ "ဟုသူကဆိုသည်။
DHL ရဲ့ 50 နှစ်ပေါင်း
San Francisco မှာသုံးလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ကုမ္ပဏီထူထောင်၏ 2019 1969 50 ခုနှစ်တွင် DHL ။ ဒါဟာတစ်နှစ်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။ သစ်တစ်ခုတီထွင်ဆန်းသစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခြင်းစတင်ထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလေမှတဆင့်စာရွက်စာတမ်းများဖြန့်ဝေဖို့ DHL ဗျူရိုကရေစီအစဉ်အလာစက်မှုလုပ်ငန်းများမှိုချိုးဖဲ့။ ထိုနေ့ရက်ကတည်းကတစ်ခုလုံးကိုအကွာအဝေးကိုဖုံးအုပ်ထား, DHL, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်န်ဆောင်မှုများနှင့်ဒေသတွင်း၌ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 220 တထောင်န်ထမ်းတွေနဲ့တကမ္ဘာလုံး operating တစ် DHL တိုင်းပြည် 380 ကုမ္ပဏီများသည်သူ့မိသားစုကိုလှည့်။ DHL ရဲ့ဖောက်သည်ဗဟိုပြုနှင့်ဖြေရှင်းချက်-oriented ယခုနှစ် 50 တစ်လျှောက်လုံးအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုယဉ်ကျေးမှု၏လောင်စာရှိ၏ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးစကားလုံးအပြောင်းအလဲနဲ့ကွန်ပျူတာ Deutsche Post ကို DHL Group မှသူကို DHL 1000 တကတီထွင်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ် operated ထုံးစံ streetscooter သည်အထိ Eco-friendly ပေးပို့မော်တော်ယာဉ်လုပ် ... 2050 နှစ်အထိကျ, "0" ၏အုပ်စုများ DHL အားဖြင့်ထုတ်လွှတ်ပစ်မှတ် 2050 ကတိကဝတ်ရောက်ရှိဖို့ရန်၎င်း၏ကတိကဝတ်သရုပ်ပြအဖြစ်, ဒါဟာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍတွင်ဦးဆောင်လမ်းပြနေဆဲဖြစ်သည်။
တူရကီပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍ၏ Digital Umeda အနာဂတ်
BTSO Lojistik AŞ, Yenişehirရှိ Air Cargo …
TransportationPark, Autism လူနာအလီ၏အိပ်မက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်
ရုရှားကုမ္ပဏီ Gazprom သည် LPG ကိုတရုတ်ပြည်သို့မီးရထားဖြင့်ပို့သည်